Ukukhethwa kwezindaba zokuhlela zika-Ephreli | Izincwadi Zamanje
Ukukhethwa kwezindaba zokuhlela zika-Ephreli
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Isivivinyo, Amabhuku, I-Novela, Inoveli emnyama
Kufika Aprili, inyanga yezincwadi nentwasahlobo icishe yenze kahle. Futhi njengokujwayelekile bayafika izindaba zokuhlela. Akunakwenzeka ukubuyekeza konke noma okuningi njengoba kunjalo, ngakho-ke lokhu kuhamba ukukhethwa kwezihloko eziyi-6 wezwi elihlukile nababhali bezizwe ezahlukahlukene. Ipheya elilodwa elinokuthinta kokuzijwayeza, umlando owodwa kanye nokusikwa okumnyama okuthathu.
1 Izimiso Zokuhle Zabatshalizimali - Petros Markaris
2 UVíctor Ros nezimfihlo zaphesheya kwezilwandle - uJerónimo Tristante
3 Iminyaka yama-walnuts. Izingane eMbusweni WaseRoma - UJosé María Sánchez Galera
4 Kuthulisiwe - uKarin Slaughter
5 Izwe Lemindeni - USam Heughan noGraham McTavish
6 Uhambo lokugcina - uJosé Calvo Poyato
Izimiso zabatshali zimali - Petros Markaris
Isanda kuphuma, kepha leli cala elisha lokucisha umlilo lifakiwe enyangeni UKostas Jaritos, ohamba e-Athene egcwele abatshalizimali abangathembekile. Yize ephila impilo ethule nonkosikazi wakhe, uJaritos kuzofanele abhekane necala lokubulala, ngoba isidumbu somuntu ocebile waseSaudi ukuthi utshale imali eningi emhlabeni ukwakha ihhotela likanokusho.
UVictor Ros nezimfihlo zaphesheya kwezilwandle - UJerónimo Tristante
Abuye umhloli UVictor Ros kule noveli esethwe eminyakeni yokugcina ye- Cuba Kwabaphathi Bamakoloni Kuphela.
SiseMadrid ngo-1885 lapho uRos ebizwa nguMaría Fuster, inkosikazi ka UMartin Roberts, umngani wakudala wephoyisa manje elisebenzela insizakalo eyimfihlo yaseSpain nokuthi ngubani wanyamalala ngaphandle kokulandela. URos uzothola ukuthi lokhu kunyamalala kuhlobene noGiselda Albertos, umculi wezinhlobonhlobo waseCuba okhangayo. Ngakho-ke uRos uzohambela eHavana, lapho ezohlangana khona nezinhloli zomhlaba wonke, amanxusa amabili, osomabhizinisi baseMelika namasosha aseSpain.
Iminyaka yama-walnuts. Izingane eMbusweni WaseRoma - UJosé María Sánchez Galera
Kuyathakazelisa ukutadisha mayelana nobuntwana eMbusweni WaseRoma. Ngomqondo wokuphendula imibuzo mayelana ne- amathoyizi wezingane nemidlalo Noma, ngokwesibonelo, lokho ababejwayele ukukwenza ngama-walnuts ambalwa. Ukhuluma nathi futhi ngokuthi basizile yini abazali babo emsebenzini noma abakufundile esikoleni. Konke kusekelwa amasampula we la izincwadi, ubuciko kanye nemivubukulo, ukwazi ukuthi izingane zasendulo zasendulo nalezo zanamuhla zazihluke kakhulu noma zazifana.
Kuthulisiwe - UKarin Slaughter
UKarin Slaughter wethula le nkanyezi entsha Ingabe i-trent, ophenya i- asesinato yesiboshwa ngesikhathi kunodlame ejele. Esinye seziboshwa simtshela ukuthi akanacala ku ukuhlasela okuhlala kuyena umsolwa omkhulu. Ugcizelela ukuthi konke bekuhlelwe yithimba lamaphoyisa elikhohlakele, eliholwa nguJeffrey Tolliver, nokuthi isigebengu sangempela sisalokhu sisikhulu: umbulali omkhulu oqondise abesifazane iminyaka. Olahlwe yicala ufuna ukufakaza, kodwa ukuze enze njalo, uWill kumele avule kabusha icala lapho kuzofanele athinte iphoyisa elihlotshisiwe.
Ngaphezu kwalokho, iTrent kuzofanele icele usizo lomuntu angafuni ukumbandakanya: the UCoroner Sara Linton, intombi yakhe nomfelokazi kaTolliver.
Izwe lemindeni - USam Heughan noGraham McTavish
Ngesihlokwana se- Whisky, izimpi kanye nokuzidela kweScotland okungekho okunye nokuba nezinkanyezi ezimbili zochungechunge njengabasayinile Outlander, sicacile ngalokho esikuthola kulolu hambo lomgwaqo olunqamula iScotland.
En ikhaya elihambayo, abadlali ababili nabangane baqala uhambo lokuhlola izwe labo. Bazosithatha futhi ngesikebhe, nge-kayak, ngebhayisikili nangesithuthuthu sihambe ngezindawo zamaphupho nangezindlela ze- Umlando namasiko. Futhi ngasikhathi sinye bacabanga ngemisebenzi yabo kwezamafilimu naseshashalazini nothando lwabo ngezwe labo.
Okwabalandeli be-hit series.
Uhambo lokugcina - UJosé Calvo Poyato
Ngiqeda ukubuyekeza ngale noveli yisazi-mlando nomlobi uJosé Calvo Poyato. Imayelana ne- ukuqhubeka kwe Umzila ongapheli, ebukeza isibalo se- UJuan Sebastián Elcano, okwathi ngo-1522 wathola ingubo yezikhali enesiqubulo esithi "Primus circumpedisti me" ezandleni zikaCarlos I, owamnika yona ngemuva kokwenza umzuliswano wokuqala emhlabeni. Wenziwe waba ngomunye wamatilosi ahlonishwa kakhulu embusweni, naye waklonyeliswa ngempesheni enesisa, kepha wayengeke ahlale emhlabeni kalula kanjalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ukukhethwa kwezindaba zokuhlela zika-Ephreli
Izinkondlo zesizukulwane sama-27